Robock Q7 MAX+: Mahery, haingana ary manafoana tena | iPhone News
Roborock Q7 MAX+: Mahery, haingana ary manafoana tena
louis padilla | 02/05/2022 10:00 | Fitaovana IPhone, maro
Manadihady ny iray amin'ireo mpanadio banga robot be mpampiasa indrindra eny an-tsena izahay endri-javatra mandroso toy ny fitetezam-paritra LiDAR sy ny fahafoanan-tena, fahaleovantena tena tsara ary afaka manadio sy mikosoka ny tranonao manontolo ao anatin'ny fotoana fohy.
Ny karazana modely ao anatin'ny sokajy mpanadio banga robot dia goavana. Betsaka ny robots miasa amin'ny finday, vacuum ary mop, saingy rehefa manampy endri-javatra isika dia mihakely ny lisitra, indrindra raha tsy te handany vola be isika. Androany isika dia mandinika mpifaninana matotra ho an'ny mpanjakan'ny mid-range, izay miavaka amin'ny fampisehoana tsara amin'ny vidiny tsara. Ny vaovao Roborock Q7 Max + dia tonga amin'ny dingana tena matanjaka, miaraka amin'ny fiasa mahazatra kokoa amin'ny avo lenta fa miaraka amin'ny vidiny tena mahaliana.e, ary miaraka amin'ny fototra manafoana tena izay icing amin'ny mofomamy.
Herin'ny suction 4200Pa
Fizakan-tena 3 ora (300m2)
Fikarohana LiDAR miaraka amin'ny sarintany 3D
Haben-drano 350ml (ho an'ny 240m2 fanasan-damba)C
Tavoahangy vovoka 470ml
Tank manafoana ny fahafaha-manao 2,5 litatra
Fifehezana feo amin'ny alàlan'ny Alexa sy Siri (amin'ny alàlan'ny hitsin-dàlana)
Ny borosy dia tsy mitovy amin'ny modely mahazatra, eto isika dia hahita iray vita amin'ny fingotra tanteraka, tsy misy bristles, izay araka ny marika dia tonga lafatra mba hialana amin`ny olana amin`ny volo izay mirona amin`ny "handrava" borosy nentim-paharazana, ary ny marina dia ny hoe somary misalasala aho tamin'ny voalohany dia tsy nanana safidy afa-tsy ny miombon-kevitra amin'ny mpanamboatra. Amin'ny borosy lehibe dia tsy maintsy ampiana borosy iray mihodinkodina lateral izay manampy amin'ny fanangonana loto lateral. Ireo borosy ireo, miaraka amin'ny herin'ny suction azo amboarina araka ny karazana gorodona, dia mahatonga azy ho banga tena mahafa-po.
Ny fitoeran-drano sy ny loto dia ampahany amin'ny siny tokana. Mazava ho azy fa misy efitra roa, fa amin'izany fomba izany dia azo atao ny mamonjy toerana. Samy manana fahafaha-manao mihoatra ny ampy hanadiovana trano antonony ireo fiara mifono vy roa ireo, na dia lehibe aza, ka tsy misy hadisoana amin'ny fanapahan-kevitr'i Roborock momba izany. Ity tanky iombonana ity dia tena mora ny manala sy manolo.
Ao amin'ny fampandehanana ny robot vacuum cleaner-mop dia misy fizarana samihafa hiatrehana. Tena ilaina ny fanadiovana, toy ny fiasan'ny mopping, saingy misy singa hafa izay mety tsy dia mazava loatra fa afaka manimba tanteraka ny traikefa amin'ny fampiasana robot. Ny rafitra fitetezana dia iray amin'ireo lafiny fototra amin'ny mpanadio banga robot. Tsy misy mahakivy kokoa noho ny tsy nahavitan'ilay robot ny fanadiovana satria very, tafahitsoka na noho izy tsy maintsy miverina any amin'ny fotony ka tsy mahita azy. Ary indrisy fa zavatra mahazatra amin'ny robots maro izany, saingy soa ihany fa zavatra tsy mitranga amin'ity Roborock ity.
El Ny rafitra fitetezana LiDAR miaraka amin'ireo sensor 4 izay nataon'ity Roborock Q7 Max + ity dia mandehandeha manodidina ny trano tsy misy olana na dia kely aza.. Hafaliana ny mahita azy mivezivezy eny amin’ny seza, mitety varavarana, misoroka ny sakana... Adino ny momba ireo robot izay midona amin'ny zava-drehetra, zavatra hafa tanteraka ity, raha tsy maintsy mitondra azy ianao dia azo antoka fa tsy ho tsara kokoa ianao!
Ao amin'ny fampiharana dia afaka mahita ny lalan'ny robot amin'ny alàlan'ny tranonao ianao, ary ny fomba fanadiovana manaraka azy dia azo avahana tanteraka: voalohany ny sisin'ny efitrano, avy eo ao anatiny, manao tsipika mifanandrify mandra-pandrakotra ny faritra manontolo. Amin'izany fomba izany dia azo atao ny manadio ao anatin'ny fotoana fohy (latsaky ny 90 minitra ao amin'ny trano iray mirefy 140m2 eo ho eo). Tsy misy robot hafa tonga akaiky amin'io fotoana io, amin'ny ampahany satria tsy maintsy nanao famerenam-bidy feno izy rehetra mba hamitana ny fanadiovana., zavatra tsy ilain'ity Roborock ity mihitsy. Miala amin'ny fotony izy ary rehefa afaka 90 minitra dia miverina amin'ny fotony miaraka amin'ny antsasaky ny bateria mbola misy. Tena fifaliana.
Ary amin'ny faran'ny fanadiovana dia tonga ny iray amin'ireo ampahany tsara indrindra: ny fanafoanana ny tenany. Ny fiara mifono vy dia kely, ampy ho an'ny fanadiovana iray, ampy iray segondra, tsy ampy ho an'ny fahatelo. Midika izany fa saika isaky ny manadio ianao dia tsy maintsy manary ny tanky na tsy ho vitanao ny manaraka. Eny, tsy mila manao na inona na inona eto ianao, satria rehefa vita sy tonga eo amin'ny fotony dia handefa ny atiny manontolo amin'ny tankin'ny robot ho any amin'ny tanky lehibe mahafoana tena., manana tanjaka 2,5 litatra, hatramin'ny herinandro (na mihoatra) tsy mila manary na inona na inona.
Raha ny amin'ny fikosoham-bary dia tsara ny vokatra, fa aza manantena ny hanala ny loto mipetaka araka izay azonao atao amin'ny mop amin'ny fanaovana pass maromaro sy "mipoitra". Izy io dia tonga lafatra amin'ny fanadiovana fikojakojana isan'andro., mamela ny tany mando fa maina haingana, ary indrindra fa tsy "maloto" toy ny ataon'ny hafa. Tsy asan'ny kintana izany fa miaro tena tsara izy.
Ny fanaraha-maso ny robot rehetra dia atao amin'ny alàlan'ny fampiharana azy, izay eo amin'ny haavon'ny endri-javatra amin'ity Roborock Q7 Max + ity. Avy amin'ny fizotry ny fandrindrana azy ka hatramin'ny fitantanana azy sy ny fijerena amin'ny fotoana tena izy ny fanadiovana, dia ny ambaratonga ambony indrindra izy ireo. Misy safidy maro ary nampiharina tao anatin'ny fampiharana amin'ny fomba tena intuitive sy mora ampiasaina.
Fomba isan-karazany amin'ny fijerena ny sarintany fanadiovana, ny fahafahana manadio amin'ny faritra, amin'ny efitrano na ny trano iray manontolo, ny fisafidianana ny herin'ny fanadiovana sy ny fanadiovana isan-karazany, ny famaritana ny karazana gorodona, ny fametrahana fanaka ... io no fampiharana feno indrindra nandramako. imbetsaka.lavitra ny hafa. Fandaharana isan-karazany, ny fahafahana mitadidy sarintany samihafa, na dia ny famaritana gorodona samihafa ho an'ny trano iray ihany, dia tsy hanana olana amin'ny fampifanarahana ny fiasan'ny robot amin'ny tranonao ianao, na inona na inona karazana azy.
Avy amin'ny rindranasa dia azonao atao mihitsy aza ny manitsy ny fifehezana feo, mifanaraka amin'ny Alexa ary na dia tsy mifanaraka amin'ny HomeKit aza (inona no andrasan'i Apple mba hampidirana ity sokajy fitaovana ity amin'ny rafitra automation an-trano?) ka amin'ny iPhone, Apple Watch na HomePod dia afaka manomboka manadio amin'ny feonao ianao. Mazava ho azy fa hahazo fampandrenesana isaky ny hetsika ianao (fanombohana, fiafarana ary "accident" mety hitranga). Ary azonao atao ny manamarina ny toetry ny kojakoja mila fanadiovana na fanovana.
Ity Roborock Q7 Max + ity no robot mpanadio banga tsara indrindra izay nosedraiko ho an'ny rafitra fitetezana azy, ny fahaleovantenany ary ny vokatra fanadiovana atolony. Izy io koa dia manana rafitra manafoana tena izay manome fampiononana miavaka ho an'ny mpampiasa. Ary manao izany rehetra izany amin'ny vidiny mahazatra amin'ny mid-range, fa miaraka amin'ny endri-javatra ambony izay tsy misy afa-tsy ny avo lenta. Ity modely miaraka amin'ny rafitra manafoana tena ity dia amidy amin'ny Amazon (rohy) (noho ny tapakila fihenam-bidy €150)
Navoaka tamin'ny: May 2 amin'ny 2022
Fanovana farany: May 2 amin'ny 2022
Rafitra manafoana tena
Fampiharana natao tena tsara misy safidy maro
Rafitra fanosotra voafetra
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Fitaovana IPhone » Roborock Q7 MAX+: Mahery, haingana ary manafoana tena
Mijirika efa ho 3GB ny angona avy amin'ny iPhone an'ny Filohan'i Espaina izy ireo
Ny Apple Watch tsy misy sensor mari-pana?